Brand, "Ikotishi" bavele emakethe Russian ngo-1997, imikhiqizo yobisi. Kusukela ngaleso sikhathi, i-brand name uye ngokuvamile kwaba owawina imincintiswano eminingi isiRashiya, njengoba nje inkampani ye eliphezulu kakhulu ubisi nemikhiqizo yalo.
inkampani Domestic isekela amasiko eside lukhona kanye zokupheka usebenzisa kuphela zemvelo ubisi izinga okusezingeni enkulu ekwakhekeni imikhiqizo yabo. Ujwayelene ukunambitheka ebuntwaneni, akukho izithasiselo noma nezivimbelakuvunda yokufakelwa iyisici esibonisa imikhiqizo brand "Little House kule ndawo." Cream yikuphi okuqukethwe amafutha ngokuphelele umphelelisi ukunambitheka ikhofi ekuseni njalo elisetshenziswa ukulungiselela air-ayisikhilimu, nososo, pates, amasobho, njll On iziphi izinhlobo ukhilimu "Ikotishi", lokho kuyasiza futhi yini umbono ngazo abathengi, uchaze lesi sihloko.
Ukwakheka ukhilimu "Ikotishi"
Ukwakheka Yemvelo kuwuphawu eyisisekelo yonke imikhiqizo ye-brand Russian. Futhi ukhilimu "Ikotishi" iyathinteka. Zenziwa kuphela ubisi fresh, ngakho zingaphenduka okumnandi. ukungaguquguquki Uniform, umbala futhi usentekenteke ukunambitheka amnandi athandwayo nawo wonke umuntu. Abakwazi nje ukungezwa itiye noma ikhofi, kodwa ukuphuza nje. A okunamafutha ukhilimu "Ikotishi" (33%) kangcono kunenye efanelekayo enza cream amakhekhe.
Quality okhilimu kuthiwa inyatheliswe ngomshini yesimanje, kodwa ubuchwepheshe ubudala, okuvumela ukuba silondoloze ukunambitheka, ajwayelekile kusukela ebuntwaneni. ubisi Fresh ayisaxhunyanisiwe efakwa emiphongolweni kuphole kancane. Ukhilimu okulungiselelwe ngezinga ezimbonini, kodwa ukuthi baphume ezingengaphansi esihlwabusayo.
"Ikotishi" (ukhilimu): Izinhlobo
Kuye okuqukethwe amafutha, inani kanye nohlobo emaphaketheni ukuhlukanisa izinhlobo eziningana cream "Indlu kule ndawo." Ububanzi limelela lezi zinhlobo ezilandelayo:
ukhilimu, 10% fat, ngaphatha ibhokisi elinezincwadi 200 ml, 480 ml bese 750 ml nge cap; e 100 ml yomkhiqizo iqukethe 118 kcal;
ukhilimu pasteurized, 10% fat ibhodlela plastic ka 270 ml;
ukhilimu fresh noma shake AMAZING vanilla enongiwe futhi caramel (10%) e ibhodlela 270 ml, okuqukethwe kwama-kilojoule umkhiqizo 136 kcal;
ukhilimu, 20% fat, ngaphatha ibhokisi elinezincwadi 200 ml bese 480 ml nokuqukethwe ikhalori 206 kcal 100 ml;
ukhilimu 25% amafutha (480 ml), ikhalori 250 kcal;
ukhilimu 33% amafutha (480 ml), ikhalori 320 kcal.
imikhiqizo Novelty kukhona ukhilimu "Cottage - vanilla-caramel." Ziklanyelwe ukuba ukungezwa ikhofi noma itiye, kanye ukusetshenziswa ngefomu okumsulwa.
Umsoco futhi usebenzise ukhilimu ingeyomzimba
Iningi umsoco ukhilimu ewela amafutha (value abo oluhambisana iphesenti fat amagremu ku iphakethe), ngaphansi - ku amaprotheni kanye carbohydrate. Mayelana 70% of the ukwakheka ukhilimu - amanzi.
izakhiwo ewusizo ukhilimu zemvelo zimi kanje:
umthombo ayegcwele kanye unsaturated okunamafutha acid;
Iqukethe inqwaba phospholipids ehlanganisa base-nitrogen bese wali band acid; sebenzisa ukhilimu fresh ulusizo asebekhulile nokuvimbela komqondo senile;
Ziyakwazi kuwumthombo wamaprotheni namandla kubagijimi;
ukhilimu fresh ziwusizo kulesetayelekile wamathumbu umsebenzi futhi kusize ukubhekana nemiphumela ubuthi chemical;
iwumthombo amino acid, is kuhlelwe hormone emzimbeni serotonin ubumnandi.
Cream "Indlu edolobhaneni" (33%): Izibuyekezo ikhasimende
Izibuyekezo Ikhasimende ukhilimu double kusukela brand "Ikotishi" ikakhulukazi omuhle. Esikhathini Izibuyekezo abantu tasters kuqashelwe lokhu okulandelayo:
100% Ukwakheka yemvelo;
nice, umnene futhi bumnandi;
ukhilimu esindayo, okuyinto ngesiswebhu kahle nokugcina ukuthungwa zabo kophudingi;
kuphakeji wabonisa izimfihlo ekubhaxabulweni, okuyinto kakhulu ukulungiswa ukhilimu;
ukulungiselela okuzenzela ice cream futhi ophehliwe kuyinto ukhilimu kangcono "Indlu kule ndawo."
Izibuyekezo aqukethe ikhasimende omubi Izibuyekezo ngalolo ukhilimu akusho ngaso sonke isikhathi abe ukungaguquguquki bushelelezi. Ngezinye izikhathi basuke uhlukanise ngqo amabhokisi nilale okunamafutha amaqoqo kanye nobisi. Ake uwalethe ukuvumelana oyifunayo iza mixer.
Recipe kusukela TM "Little House Ezweni": amaqanda nge ukhilimu
amaqanda Original ngiyocasha, ephekwe ukhilimu kuhhavini, kuyoba yinto enhle kakhulu kukho ibhulakufesi ngeSonto. Ukunambitheka kokudla ekhaya etholwe nje imilingo, uma lisetshenziswe ukulungiswa "Ikotishi" imikhiqizo.
Cream (80 ml), i-pair of wezipuni batheleka abicah isikhunta. Kuqhutshwa kusuka phezulu iqanda, engeza usawoti kanye pepper. Isikhunta zithunyelwa epanini ngamanzi, bese kuhhavini imizuzu 10 at 180 degrees. Ngalesi sikhathi epanini ibhotela ethosiwe isinkwa tincetu zibe emapheshana. Ungakwazi ukupheka ubhontshisi crispy kule into yokucocobalisa. amaqanda Ready ethosiwe ngqo kuhovini wakhonza ngesinkwa kubekwe ikhofi elishisayo ne vanilla cream caramel. Bon appétit!
Kungakanani kukhona ukhilimu "Indlu edolobhaneni?"
Imikhiqizo emelelwa trade mark ungaphakathi esigabeni ephakeme intengo, ngenxa ukubunjwa yayo kanye engokwemvelo eliphezulu kakhulu. Akungabazeki ukuthi ikhekhe cream futhi emoyeni obukhulu, uma esetshenziselwa ukhilimu ekubhaxabulweni "Indlu kule ndawo."
Cream zinenani ezahlukene kuye ngokuthi okuqukethwe amafutha esibekiwe on the isembozo. Ngokwesibonelo, iphakethe elincane nge-10%, amanoni Ukwakheka kubiza ruble ngu-50, kanye enkulu - kuyinto ruble 160. Eqolo kukhona ukhilimu esindayo 33% ngoba ekubhaxabulweni. Omunye iphakethe ivolumu 480 ml ngokwesilinganiso kubiza ruble mayelana 200.
Calorie izithelo - into sasingazi
Cork lokusibekela izindonga: izinhlobo kanye nezici ukufakwa
Umuzi Orenburg esifundeni: Novotroitsk, Buzuluk, Orsk, ecacile. Incazelo emfushane, isithombe
Natalia Goncharova - umculi biography nesithombe